Ogaden News Agency (ONA) – Ogaysiis: Jaaliyada Ogadenia ee Sucuudi oo Xaflad Balaadhan Qabanaysa Maalinta 3 aad ee Ciida.
Waxaa la ogaysiinayaa dhamaan bulshada somliyeed ee wadanka sucuudi Arabia gaar ahaan magaalada Riyaad ee caasimada boqortooyada sucuudiga inay ka dhicidoon to xaflad balaadhan oo ay qaban doonaan Jaaliyada Somalida Ogadenia.
Waxaa munaasabada Ciidul-Fidhriga lagu xusi doonaa xuska sanad-guurada JWXO. Xafladan oo ahaan doonta haduu ilaahay yiraahdo mid si gaar ah loo maa muusi doono ayaa laga codsanayaa dhamaan shacabka Somaliyed inay kasoo qaybgalaan.
Waxaa lagu soo bandhigi doonaa munaasabadan barnaamij kala duwan ood ka heli doontaan, barnaamijtan oo isgu jira suugaan kala duwan sida Heeso, Majaajilo iyo Riwaayad wadani ah waxaana kasoo Qayb Gali doona Majaajilays tayaal somaliyeed oo caan ah aadna looga yaqaano bulshada Somaliyeed dhexdeeda.
Xafladan ayaa waxay dhici doonta maalinta jumcada ah oo ku beegan 08/07/2016 kuna Beegan Taariikhda Hijriyada 03/shawaal 1437. Hadaba waxaan ugu baaqaynaa dhamaan shacab waynaha Somaliyeed inay kasoo qayb galaan. Hoos kala soco faah faahinta munaasibadan taariikhiga ah.